Kwiminyaka yakutsha nje kweli lizwe inkqubo esemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke sesinye uninzi ethandwa kakhulu kuluhlu zonke specialties. Ukufumana phandle into ingu wafundisa kwi-bazo faculties, oko kuya kuba umsebenzi wakho kwaye kulula njani ukuba ukufumana umsebenzi.
I-lawyer ngu u-entsimini, umthetho. Uyazazi i-nemithetho nemiqathango, uyayazi indlela ukusebenzisa kwabo kwaye unako babafundise izakhelo abanye abantu. Ingaba i-ingcali entsimini, umthetho, apho banokuthatha na isemthethweni indawo ukusuka a lawyer ukuba ijaji. Kuyimfuneko ukuze ufumane umthetho enomsila.
I-kokuhluma lo mhlaba solwazi yenzekile kwi-Yamandulo Eroma. Kwaba apha ukuba wabonakala kuqala abameli umthetho — cartridges. Kubo isisombululo ka-disputes kwaye matyala umsebenzi waba ingcamango ka-ngqo kwaye kubeka kwi shoulders ka-ababingeleli. Ne-advent ka-cartridges zomthetho ulwazi siqulunqe rapidly. Kuqala, amandla isigqibo kubeka kwi shoulders ka-emperors, ookumkani kwaye kweentloko States.
Ishishini sele evolved, wabonakala njengoko defenders kwaye abatshutshisi. Bazalwe iinkundla kwaye inkqubo yezeejaji. Ngokuhamba kwexesha umthetho siqulunqe kwi ngokubanzi ishishini. Isiseko kuba imithetho waba inkolo, nje imiyalelo Ebhayibhileni baba lokuqala imithetho. Benza imigaqo, apho uluntu ngolu hlobo kule mini. Uphuhliso umthetho omiselwe ecothayo, ukungeniswa imithetho yi-Tsar Upetros Yokuqala. Kwaba lowo wanika banyukele uphuhliso isemthethweni kwicandelo lethu. Ngoko ke inkundla revolution. Nje emva kokuba silifumene a isemthethweni isakhiwo, uvale i-bale mihla.Nowadays, umthetho yi libanzi isebe ulwazi izakhono. Luquka yonke inkqubo yezeejaji, ulwazi imithetho isemthethweni norms kunye neendlela zolawulo kwabo ecacileyo sebenzisa njengoko abantu kunye oqingqiweyo zesixeko.
Ekhaya - Isebe Lophuhliso lwamaphandle nobuyekezo lwemihlaba